Ayeparbuuha — Steemit
smt2 (38)in #esteem • 3 years ago
Umfundi wamanje? Ngena ukuze ufinyelele inkambo yakho
Kungani Kufanele Ufunde IsiNgisi Nathi? Izifundo zethu zesiNgisiIziphakamiso zokufunda ze-EnglishIzizindawoUkuqashwa kwamakhasimende
Umcwaningi we-TV yama-American ukuvakashela i-Wall Street isiNgisi sase-Asia
05/03/2018 Nge-Wall Street English
Ukufunda kulula futhi kumnandi nge-Wall Street English.
Kuyiqiniso! Ungaphi olunye ufunda isiNgisi ngenkathi ubheka uchungechunge lwe-TV lokufunda ikhwalithi ye-Hollywood? Funda ukuze uthole okwengeziwe.
Uchungechunge lwe-Wall Street English TV ngumdlalo weqembu labantu abazama ukwenza amaphupho abo agcwaliseke ngenkathi behlala eNew York.
Ngokusho kocwaningo emazweni angu-17, indlela ethandwa kakhulu abafundi abazama ukuqala isiNgisi ngokusebenzisa izindlela ezingahlelekile njengokubukela i-English TV, i-YouTube noma ukufunda amaphephandaba angamaNgisi (Ucwaningo lwe-Morar English Learners Journey Research 2016).
Ngabafundi be-Wall Street English bangafunda ngokubuka uchungechunge olujabulisayo nolumnandi lwe-TV lapho bangafunda khona ngamasiko ahlukene futhi bajwayele ububanzi bezimpawu ezivela emhlabeni wonke.Akujabulisi kuphela kodwa futhi kuyasebenza.Abalwazi bajoyina ama-smallclasseswithqualifiedEnglishteacherswhichhelptomaketheWallStreetEnglishmethodthebestwaytolearn .
I-Wall Street English iyajabula ukumemezela ukuthi omunye wabadlali abakhulu abavela kumdlalo we-WSE TV uzovakashela abanye abalandeli bakhe ekuvakasheni izikhungo zase-Wall Street English e-Asia ngoMashi. UNicole Maxali udlala umlingisi 'Khae' ovela eThailand , ku-20'.Khee usebenzela inkampani enkulu kodwa amaphupho okuba nebhizinisi lakhe lapho enza khona imikhiqizo eyenza impilo yabantu bonke ibe ngcono.
UNicole uzovakashela izikhungo zaseNgilandi zaseWall Street eNingizimu Korea, eHong Kong naseChina ngoMashi wonke ukunikeza ama-workshops ashukumisayo kubafundi besiNgisi ezindaweni zase-WSE.
14th, 15th, 16th March: WSE South Korea22nd-24 Ntambama: WSE Hong Kong28th March - 1st April: WSE China
UNicole uzosebenzisa ubuchwepheshe bakhe njengoSomlomo okhuthaza ukugqugquzela abafundi nabafundi abangahle basebenzise i-WSE njengendlela yokufeza amaphupho abo.
Uzohlola futhi ezinye zezinto ezinhle zaseSeoul, eHong Kong, eBeijing naseShanghai.Ungalandela ama-Asian adventures yakhe ku-akhawunti yakhe ye-Instagram: nicolemaxali, i-akhawunti ye-WSE Global: wallstreetenglish_global kanye ne-hashtag #KhaeWSETour.
UNicole (Khae) uye wavakashela i-WSE Thailand naseVietnam emuva ngo-2017 futhi wabingelwa njengodumo odumile!
"KwaseThailand, indawo yonke uNicole eya kuyo yaba nemicimbi emihle futhi abafundi bethu bayamthanda.Sinezimpendulo ezinhle ezivela kubafundi bethu nakubasebenzi.Sibuye sithole abafundi abaningi kakhulu kunalokho okulindelwe, okwakumnandi." - UNkk Pamanee Lefèvre, HeadofMarketing , I-WSE Thailand
"Ngizizwa ngixhumene namafilimu futhi ngifuna ukwazi okuningi.Ukukwazi ukuhlangabezana noKae empilweni yangempela kufana nephupho eligcwaliseka!" - U-Ambassador we-Student, WSE Thailand Rangsit
Mayelana noNicole Maxali
UNicole Maxali ungumphathi Wezindaba / uMqondisi / Umphathi Wezezindaba owakhulume nge-Creative Writer / Umcwaningi / uSomlomo okhuthazayo. Umbukiso wesifazane oyedwa -Nicole uhambele lonke elase-United States ngokubukeza ngokuhlaziya nokuma okumisiwe. Okwamanje usebenza eNew York City okuthengiswayo kwamakhompiyutha kanye nezindinganiso ezithintekayoTVpilottoAmericancablenetworks .nicolemaxali.com
Landela uNicole on Instagram ukuthola ulwazi lwakhe nge-Asia! Https: //www.instagram.com/nicolemaxali/
Mayelana ne-Wall Street English
I-Wall Street English (WSE) ingomunye wabahlinzeki abakhulu kakhulu bezemfundo yesiNgisi kubantu abadala emhlabeni jikelele.Ngonyaka we-2018 WSE uqhutshwa ezindaweni ezingaphezu kuka-400 ezindaweni ezingu-28 emhlabeni jikelele.
Thola kabanzi mayelana NamaKhosi ethu esiNgisi bese uqala ukufunda manje!
Ngithole lesi sihloko siwusizo
Yabelana ngalokhu okuthunyelwe kwezindaba
Ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.
Umbhali walokhu okuthunyelwe
Funda isiNgisi nathiIzifundo zethu zesiNgisiIzindlela zokufunda zesiNgisi
Mayelana NathiKhetha ithimbaNdawo
3 years ago in #esteem by smt2 (38)
Server time: 15:48:19 Account Level: 0
Total XP: 46.00/100.00